Onyinye ihe mgbochi iji tụlee ihe kacha mma data scraping software
E nwere ụzọ dị iche iche iji nweta data sitere na blọọgụ na saịtị nke mmasị gị. Ụfọdụ n'ime usoro nyocha data na-adabara ndị mmepe na ụlọ ọrụ ka ndị ọzọ na-eche maka ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri na freelancers. Nchịkọta weebụ bụ usoro dị mgbagwoju anya nke na-eme ka data a na-emezighị emezi n'ime ihe ọmụma. A na-emejuputa ya naanị mgbe anyị na-eji ngwanrọ na ngwá ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Ngwaọrụ ndị a na-ejikọta na saịtị na gosipụta data bara uru na ụdị a haziri ahazi.
1. Ihe Ochie Oke:
Ekebewo akwukwo akwukwo Python maka ichoro faịlụ XML na HTML. Ọ dị mfe ịwụnye Mmasị Mara Mma ma ọ bụrụ na ị na-eji usoro Ubuntu ma ọ bụ Debian.
2. Bubata. Ee:
Bubata. Ibu bụ ngwá ọrụ na-ekpuchi webs free anyị na-eme ka anyị wepu data sitere na saịtị dị mgbagwoju anya ma dị mfe ma dezie ya n'ime dataset. A maara ya nke ọma maka njikwa interface nke oge a na nke onye ọrụ.
Mozenda bụ ihe ọzọ bara uru ma dị ịtụnanya nchịkọta weebụ nke na - eme ka ọ dịrị anyị mfe iwepụ data ma weghara ọdịnaya site na ọtụtụ saịtị. Ọ na-abịa ma na free na ugwo nsụgharị.
ParseHub bụ ngwá ọrụ ntanetị weebụ nke na-enyere aka nyochaa ma ederede na foto. Ị nwere ike iji usoro ihe a iji nweta data sitere na ọnụahịa ozi, ọpụpụ njem, na ụlọ ahịa ntanetị.
Octoparse bụ ngwá ọrụ ntanetị weebụ maka Windows. Ọ nwere ike ime ka data ndị a na-emeghị ka ha bụrụ nke a haziri ahazi n'enweghị mkpa koodu. Ọ dị mma maka ndị mmemme na ndị mmepe.
CrawlMonster bụ usoro ihe ntanetị weebụ nke na-arụ ọrụ ma dịka onye nchapu na onye ntanetị weebụ. Ọ bụ ndị ọkachamara SEO na-eji ya eme ihe na-enye gị ohere iṅomi saịtị n'ụzọ ka mma.
Nkọwapụta bụ ngwá ọrụ ntanetị weebụ.Naanị ị ga-arịọ arịrịọ ahụ ma nye ụfọdụ ihe atụ nke otu ị chọrọ ka esi nweta data gị.
8. Egwurugwu nkịtị:
Crawl nkịtị na-enye anyị ihe ntanetị bara uru nke a pụrụ iji mee ihe maka ịwa ebe nrụọrụ weebụ anyị.O nwekwara data ndị na-egbuke egbuke, ma mepụta metadata maka imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ search engine gị.
Crawley bụ ntanetị weebụ na ntinye data nke nwere ike ịmecha ọtụtụ saịtị, na-agbanwe ha data ntanetị n'ime ụdị a haziri ahazi. Ị nwere ike nweta nsonaazụ na usoro CSS na CSV.
10. Ojuju Ojuju:
Afọ ojuju bu otu n'ime ihe kachasi ike ichota web weebụ. Ọ na-enye ohere nke ngwa ngwa nke ndị na-ahụ maka ntanetị weebụ.
Diffbot bụ ma ngwa nchapu data na crawler weebụ. Ọ na-eme ka ibe weebụ gị gaa na API, na-enye gị nsonaazụ kachasị mma.
12. Dexi. Ee:
Data Scraping Studio na-ewepụta data site na HTML, XML, PDF akwụkwọ yana ọtụtụ ibe weebụ.Ọ dị ugbu a maka ndị ọrụ Windows nanị.
FMiner bụ onye na-ese onyinyo eserese na ngwa ntanetị weebụ nke na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ na nhọrọ nchịkọta nhọrọ igwe ya.
Ọchịchị bụ ọrụ ntanetị weebụ nke nwere ike iji wepụ data sitere na adreesị ozi-e na ibe weebụ.Ọ bụ usoro ihe nchọgharị nke na-achọghị nrụnye iji nweta ihe ndị ahụ Source .